सिल्टल्ट: पप-अपहरू कसरी रोक्न, अपवादहरू थप्नुहोस्, र समस्या निवारण मोजिला फायरफक्समा
निम्न आलेखमा, अधिकतम बेल सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धकले तपाईको मोजिला फायरफक्स ब्राउजरमा पप-अप नियन्त्रण गर्ने बारेमा थाहा पाउनु पर्ने सबै सेटिङहरू बताउँछ।
पप-अप के हो?
पप अप अप ब्राउजर विन्डोज हुन् जुन स्वचालित रूपमा तपाईंको अनुमति बिना तपाईको ब्राउजरमा देखा पर्दछ। तिनीहरूले पूर्ण स्क्रिन कहिल्यै नखोल्न र हालको पृष्ठको माथि वा यसलाई तल पप गर्न सक्दछ (पप-डाउनहरू)। फायरफक्समा एक अद्वितीय सुविधा छ जसले तिनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई पप-अप र पप-अन्डर दुवै नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ विकल्प पृष्ठ भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले पप-अप ब्लक गर्ने सुविधा पूर्वनिर्धारित रूपमा खोल्नुहुनेछ भनेर पाउनुहुनेछ। यदि प्रयोगकर्ताले पहिले फायरफक्स जानकारी पट्टी खारेज गरेको छैन भने, यो कुनै पनि बेला ब्राउजर ब्लक पप-अप देखा पर्नेछ। अवरुद्ध पप-अप चित्रण गर्ने प्रतिमा हालको ठेगाना पट्टीमा पनि देखाइनेछ।
साइटमा पप-अप अवरुद्ध विकल्पहरू पहुँच गर्न, जानकारी पट्टी वा ठेगाना पट्टीको प्रतिमाबाट विकल्पहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं निम्नबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
हालको साइटमा पप-अप अनुमति दिनुहोस् वा रोक्नुहोस्;
पप-अप अवरोधक विकल्प सम्पादन गर्नुहोस्;
तपाइँलाई सन्देश अवरोधित पप अप बारेमा सूचित गर्न रोज्नुहोस्;
अवरुद्ध पप अपको बारेमा विवरणहरू देखाउनुहोस्;
साइटमा पप-अप अवरुद्ध गर्न अन्य वेबसाइटहरूमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। केही वेबसाइटहरूले केही महत्त्वपूर्ण सुविधाहरूको लागि पप-अपहरूको प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईंले तिनीहरूको पप-अप ब्लक गर्नुभयो भने, यो यी विशेषताहरू असक्षम गर्दछ। केही ब्राउजहरूलाई अनुमति दिने बेलामा तपाईंको पप अप चलाउन अनुमति दिनुहोस्, तपाइँले निर्दिष्ट वेबसाइटहरू पप-अपहरू देखाउन अनुमति दिने सूचीलाई आवश्यक पर्नेछ।
पप-अप अवरुद्ध गर्दा सधैँ काम गर्दैन।.केहि वेबसाइटहरु को बारे मा बताइए कि कसरि अप्रयुक्त तरीकों को उपयोग गर्नुहोस, जो फायरफक्स को लागि उनको पॉप अप को रोकन पछि पनि रोक्न को लागि मुश्किल हो।
यहाँ पप-अप अवरोधक सेटिङहरूमा अपेक्षा गर्ने आशा छ:
1। पप-अप अवरोधक सेटिङहरू पहुँच गर्दै
शीर्ष-दाँया कुनामा मेनु बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र ड्रप-डाउन मेनुबाट विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्;
गोपनीयता र सुरक्षा प्यानलमा ट्याप;
अनुमति खण्ड अन्तर्गत ब्लक पप अप विन्डोहरू जाँच गर्नुहोस्;
अपवाद टैब को तहत, एक नया संवाद विंडो प्रकट हुन्छ जहाँ तपाईं साइटहरु को एक सूची इनपुट गर्छन जसलाई तपाईं अनुमति दिन चाहानुहुन्छ;
संवादले तपाईंलाई निम्नलाई संकेत गर्दछ:
अनुमति दिनुहोस्: तपाईंलाई अपवाद सूचीमा वेबसाइट थप्न मद्दत गर्दछ;
साइट हटाउनुहोस्: तपाईंलाई अपवाद सूचीबाट वेबसाइट हटाउन सक्षम गर्दछ;
सबै साइटहरू हटाउनुहोस्: अपवाद सूचीबाट सबै वेबसाइटहरू हटाउँदछ;
2। यदि पप-अप ब्लक भएको छैन भने के हुन्छ?
पहिलो, जाँच गर्नुहोस् कि पप-अप फायरफक्सबाट उत्पन्न हुन्छ। उपस्थितिले तपाइँलाई सूचित गर्नु पर्छ कि पिक-अप फायरफक्स ब्राउजर बाट आउँछ। यदि पप-माथि विन्डोमा त्यहाँ एक विस्मयादिबोधक चिह्नको साथ सर्कलमा छवि भएको छ भने, त्यसपछि पप अप फायरफक्सबाट छ। यसको अनुपस्थिति भनेको तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईको मैलवेयरको पीडित हुन सक्नुहुनेछ जुन तपाईको पप अपको स्रोत हो।
दोस्रो, जाँच गर्नुहोस् यदि साइट बहिष्करण सूचिमा थपिएको छ भने। पप-अप ब्लक गर्ने सेटिङहरू पहुँच गर्न प्रक्रिया पालन गर्नुहोस् र अपवाद संवाद बक्स खोल्नुहोस्। यदि वेबसाइटले पप अपको कारण अपवाद सूचीमा छ भने, साइट हटाउनुहोस्, र त्यसपछि बचत गर्नुहोस् र पृष्ठ बन्द गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ पप-अप सञ्झ्यालहरूले जान्दर्भिक चाल फायरफक्सद्वारा निश्चित गर्नका लागि पक्का-अपहरू साइटहरूमा काम गर्न आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा निश्चित गर्न। त्यसैले, माउस क्लिक गरेर वा कुञ्जी थिच्ने पछि सञ्झ्यालले देखाउँछ भने निर्धारण गर्नुहोस्। यदि तिनीहरूले गर्छन, र पप अप अवरुद्ध सुविधा चालू छ, तपाईंलाई चिन्ता गर्नुपर्दैन।
यदि पप अप अप सन्झ्यालहरू विन्डोजहरू हेर्न डिजाइन गरिएका छन् तर वास्तवमा होइन, त्यसो भए फायरफक्सले तिनीहरूलाई रोक्न असक्षम पार्दछ।
अन्तमा, यदि सर्वेगेजमोबाट सर्वेक्षणमा भाग लिन मोजिला खोल्न पछि पप-अप देखा पर्दछ, यो एक कम्पनी भित्री कार्यक्रम हो र फायरफक्स यसलाई ब्लक गर्दैन।